Onyinye pụrụ iche na ngwaahịa Koogeek Smart | Androidsis
Ego na Koogeek Home Ngwaahịa na Amazon
Edere Ferreno | | Ngwaọrụ ndị ọzọ
Koogeek bụ akara nwere ike dị ka ọtụtụ ndị ọrụ. Ọ bụ akara ama ama maka imepụta ngwaahịa maka ụlọ ejikọrọ, ebumnuche ime ka ndụ ndị ọrụ dịkwuo mfe. Ebe ọ bụ na ekele ha, anyị nwere ike jikọọ ngwaọrụ n'ụlọ, ka anyị ga-enwe ike ijikwa ha remote, ma ọ bụ iji enyemaka dị ka Google Assistant. Ihe na-enyere aka mee ka ndụ anyị dịkwuo mfe.
Mgbe niile, anyị na-ahụ ego na ngwaahịa Koogeek na Amazon. Nke a bụ ikpe ugbu a, ka anyị na-ahụ obere nhọrọ nke ụdị ngwaahịa ika kacha ewu ewu nwere mbelata na ụlọ ahịa. Ohere dị mma iji nweta otu n'ime ngwaahịa ndị a iji mee ka ndụ gị nwekwuo ntụsara ahụ.
N'ihi nke a, n'okpuru ebe a, anyị ga-agwa gị banyere ngwaahịa ndị a nke ika, nke bụ nwa oge na nkwalite na Amazon. Ya mere, ọ bụrụ na ịmaghị banyere ngwaahịa Koogeek, a na-egosi ya dị ka ohere dị mma iji nweta ha. Kedu ngwaahịa anyị na-ahụ na mbelata ego?
1 Koogeek Wi-Fi Smart nkwụnye
2 Koogeek Wi-Fi Smart Strip
3 Koogeek Electrostimulator Digital Massage
Koogeek Wi-Fi Smart nkwụnye
Anyị na-amalite site na otu ngwaahịa ama ama na katalọgụ Koogeek. Ọ bụ plọg smart, nke nwekwara njikọ WiFi. Ọ na-enye anyị ohere nke jikwaa ngwaọrụ ọ bụla anyị jikọọ na remotely n'otu aka ahụ. Ya mere, anyị nwere ike ịhazi n'ụzọ dị mfe ịgbanwuo ma ọ bụ gbanyụọ ngwaahịa ahụ mgbe niile. Na mgbakwunye, ọ nwere nnukwu uru nke ịbụ dakọtara na Google Assistant na Alexa.
Yabụ ọ bụrụ na anyị na-eji onye enyemaka mgbe niile, anyị nwekwara ike ịgbanwuo ma ọ bụ gbanyụọ ika a. Anyị nwere ike ịchịkwa ya site na iwu olu, nke na-eme ka ọ dị mma maka ndị ọrụ. Ọrụ ọzọ kachasị mkpa bụ akara nke oriri, nke ga-ekwe omume ekele maka ngwa Koogeek. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịhụ oriri nke ngwaọrụ ndị anyị na-ejikọta na plọg. Ọrụ bara uru nke ukwuu.
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ ngwaahịa e mere iji mee ka ụlọ anyị nwee ọgụgụ isi karịa, ekele maka ntinye ya dị mma na gburugburu ebe obibi, na-adaba na ndị bịaranụ. Na mgbakwunye, ọ dị mfe ịchịkwa ihe niile na-eji ngwa na ụlọ ọrụ na-eme ka anyị. Nke na-eme ka ihe niile dị mma.
Na nkwalite a, ọ bụ na ọnụahịa nke 11,51 euro (mbelata 28% na ọnụahịa mbụ). Agbanyeghị, enwere ike ịzụta plọg abụọ, na nke a naanị 18,71 euro. N'okwu abụọ a, iji nweta mbelata na nkwalite Koogeek a, ị ga-eji koodu a: JCX4ZSWH dị ruo Maachị 31st.
Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. plọg smart a sitere na Koogeek
Koogeek Wi-Fi Smart Strip
Nke abụọ, anyị na-ahụ ngwaahịa ọzọ kachasị ewu ewu na katalọgụ Koogeek. Ọ bụ warara, na nke a na ngụkọta nke plọg anọ. N'ihi ya, anyị nwere ike jikọọ ụdị ngwaọrụ niile dị n'ụlọ anyị. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-ekwe ka anyị jikwaa ngwaọrụ ndị a remotely. Ya mere, anyị nwere ike ime ka ha gbanyụọ ma ọ bụ gbanye ya na nkasi obi dị ukwuu.
Na mgbakwunye, ọ pụtara maka ịrụ ọrụ na ndị isi ndị na-enyere aka. Yabụ ị nwere ike jiri ike na Alexa ma ọ bụ Google Home N'ụzọ dị mfe. Ya na IFTTT, otu n'ime ngwa ama ama na gam akporo. Nke a na-enye ohere ka ịgbanwuo ma ọ bụ gbanyụọ ngwaọrụ ejikọrọ na ya ozugbo, ọbụlagodi na-eji iwu olu.
Enwere ike ịhazi ya n'ụzọ dị mfe. Nke mere na ọ ga-ekwe omume ịgbanwuo ma ọ bụ gbanyụọ ngwaọrụ. Ihe ndị a niile ga-ekwe omume na ngwa Koogeek, nke na-eme ka o kwe omume. A na-ebudata ngwa ahụ na ekwentị ma si otú ahụ nwee njikwa ngwaọrụ niile na nkasi obi dị ukwuu. Tụkwasị na nke a, warara a nwere nchebe megide overvoltages, nke nwere ike imetụta ngwaọrụ.
Na nkwalite Koogeek a na Amazon, Ị nwere ike ịzụta warara na mbelata 27%.maka naanị 26,99 euro. Nkwalite a dị ruo Maachị 31. Iji nweta mbelata, ọ dị mkpa iji koodu mbelata a: LECNC7NS
Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. eriri smart a dakọtara na Alexa na Google Home
Koogeek Electrostimulator Digital Massage
Koogeek abụghị akara nwere naanị ngwaahịa ụlọ na katalọgụ ya. Ebe ọ bụ na anyị nwekwara nhọrọ dị mma nke ngwaahịa emebere maka ahụike, iji nyere aka melite ahụike nke ndị ọrụ. Otu n'ime ngwaahịa ndị kachasị ewu ewu na nke a bụ nke a dijitalụ electrostimulator, EMS. Ngwaahịa bara uru nke ukwuu, nke nwekwara obere nha nke na-eme ka ọ dị mfe iburu gị mgbe niile.
Ebe ọ bụ na ekele ya, ọ ga-ekwe omume ịnweta ịhịa aka n'ahụ, nke ike ya na-agbanwe ma anyị nwere ike ịhazi. N'ihi na, anyị nwere ike iji ya mee ihe n'ọtụtụ ọnọdụ. Ọ bụrụ na anyị nwere nsogbu anụ ahụ, dị ka azụ mgbu ma ọ bụ ahụ mgbu, anyị nwere ike ịtọ otu ike. Ma ọ bụrụ na ihe anyị na-achọ bụ izu ike, anyị nwere ike ịkụ nzọ na nke ọzọ dabara adaba na oge ahụ.
Ihe niile metụtara nke a Koogeek massager anyị nwere ike hazie na ngwa gị, dị maka gam akporo na iOS. Ya mere ọ dị mfe iji. Anyị nwekwara ụdị ojiji dị iche iche, ka anyị wee nwee ike iji ya na azụ, olu, ụkwụ ma ọ bụ ubu, dịka ọmụmaatụ. Ọ na-adabara nke ọma na mkpa onye ọrụ n'oge ahụ.
N'ihi nkwalite a nke ngwaahịa ika na Amazon, ọ ga-ekwe omume ịnweta mbelata 33%.. N'ụzọ dị otú a, ọnụ ahịa ya bụ naanị 19,99 euro. Nkwalite enwere ike iji naanị ruo Maachị 31st. Iji nweta mbelata maka ngwaahịa a, ị ga-eji koodu mbelata a: Z54DGDD5
Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. Nke a electrostimulator.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwaọrụ ndị ọzọ » Ego na Koogeek Home Ngwaahịa na Amazon
Otu esi agbanwe usoro ngosi gam akporo site na ịpịghachi ya na mmasị gị. Ọpụrụiche !!